रेलबाट निस्किएका राजकुमारलाई रुसमा लुटेराहरुले यती सम्म गरेर ज्यान लिए ! – दैनिक नेपाल न्युज
रेलबाट निस्किएका राजकुमारलाई रुसमा लुटेराहरुले यती सम्म गरेर ज्यान लिए !
प्रकाशित द्वारा: शनिबार, भदौ २१, २०७६
काठमाडौँ । कपिलवस्तुका राजकुमार यादवको रुसमा लुटेराद्धारा हत्या भएको छ । घटना मंगलबारको हो । धुब्रकुमार अहिरका छोरा राजकुमारको मंगलबार बिहान करिव साढे दुई बजे लुटेराहरूद्वारा बिभत्स हत्या भएको रुसका संचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
मेट्रोबाट बाहिर निस्कने क्रममा अज्ञात लुटेराहरूले हातपात गरी मरणासन्न हुने गरी छोडेपछि अत्याधिक रक्तश्रावका कारण ज्यान गएको हो ।
नेपाली युवाको विभत्स हत्या गर्ने लुटेराहरुलाई तत्कालै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । मृतकको शवलाई नेपाल पठाउने तयारी भइरहेको एनआरएनए एनसीसीका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् ।
अमेरिका जाने आप्रबासी सङ्ख्यामा ५६ प्रतिशतले गिरावट
ब्लड क्यान्सर पीडित रनिक परियारलाई आर्थिक सहयोग र उनको हातबाट केक काटी मेरो जन्म दिन (भिडीयो सहित)